Marseille - आकर्षण
फ्रान्समा आकर्षणको सन्दर्भमा सबै भन्दा धनी व्यक्तिको अन्तर्वार्ता बिना मार्सिलेसहरू बोलाउन सकिन्छ। तिनीहरू धेरै विविध र रोचक हुन्छन् कि शहरमा एक हफ्तेको बास पनि उनी सबैको जाँच गर्नको लागि पर्याप्त छैन। र के हो आश्चर्यजनक छ, मार्सिलेका स्थानहरू मात्र पुरानो भवनहरू र मध्य युगको परिदृश्य डिजाइनको उदाहरणहरू हुन्। त्यहाँ आधुनिक आकर्षणहरू छन् जुन संसारका पर्यटकहरू आकर्षित गर्छन्, पुरातनताका वस्तुहरू भन्दा कम। के तपाईं फ्रांसीसी शहरको आभासी भ्रमणमा एक समृद्ध इतिहासको साथ जान तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि जानुहोस्
अतीतको एक अमीर विरासत
सम्भवतः पुरातनत्वका प्रशंसकहरूको लागि सबैभन्दा आकर्षक मार्शलहरूको कैथेड्रलहरू छन्, र तिनीहरूमध्ये धेरै छन्। तीर्थयात्राहरूका लागि, उदाहरणका लागि, सेन्ट विक्टरको एबीबी, वी शताब्दीमा पहिलो पटक बनाइएको, पवित्र रुचि को प्रतिनिधित्व गर्दछ। इतिहासकारहरूका अनुसार, तीनवटा वर्षपछि मठको निर्माण अवस्थित छ, किनकि यो कोटाडेन्सले अन्तिम पत्थरमा नाश गरेको थियो। तर केही वर्षहरूमा ती मन्दिरको पुनर्स्थापना सुरु गर्न सम्भव थियो।
कुनै पनि रोचक ठाउँ मार्सेल को कैथेड्रल को पैदल छ। उहाँ धेरै वर्ष पुरानो छैन, तर उनको "हाइलाइट" एक अद्वितीय आर्किटेक्चर शैली हो। XIX शताब्दीमा निर्मित, कैथेड्रलले आफ्नो भव्यता संग प्रभाव पारेको छ र वास्तुकला विवरण को बहुतायत पत्थर बाट उक्लिएको छ।
मंदिर वास्तुकला को अर्को उदाहरण नोरे-डेम डे ला Garde को कैथेड्रल हो। यदि तपाईंले कुनै फ्रान्सेलीलाई सोध्नुहुन्छ कि मार्सेल्समा कुन कुरा हेर्नु हुन्छ भने, तपाईलाई धेरै पहाडी पहाडमा अवस्थित यो सबैभन्दा भ्रमण गरिएको आकर्षणको हेराईको मजा लिन सल्लाह दिइनेछ। यसैले नोट्रे डेम डे ला गार्ड मार्सिलेसको कुनैपनि बिन्दुबाट देखिन्छन्।
त्यहाँ शहरमा छ र उपन्यासमा वर्णन गरिएको छ। डिमामा ल्यान्डमार्क - क्यासल यदि। यसको निर्माण 1524 मा सुरु भयो, र पहिले नै 1531 मा "pesky छिमेकी" (यति घेरिएको जेल स्थानीय निवासीहरूले भनिन्) पूरा भएको थियो। यदि महल मा पुग्न एकमात्र तरिका हो - मार्सिलेसहरूमा पुरानो पोर्ट हो, कुन डुङ्गाले किल्लामा जान्छ। डुङ्गाको यात्राको आधा घन्टा लाग्छ र 10 यूरो लाग्छ।
माथि उल्लेखित पुरानो पोर्टले यसको नामलाई सही ठहराउँछ। यो सयौं वर्ष पहिले निर्माण गरिएको थियो। तर आज पनि पोर्टले नियमित रूपले आफ्नो कार्य गर्दछ, सम्पूर्ण भूमध्यसागरको प्रमुख समुद्री केन्द्र बन्छ। यदि तपाईले कसैलाई आफैलाई बिहानको पुरानो पोर्टमा भेट्टाउनुहुन्छ भने, तपाईं दर्जनौं डुङ्गा देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ मछुआरे अर्को जहाजको लागि समुद्रमा जान्छ।
आज शहरमा तपाई धेरै आधुनिक इमारतहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ध्यान दिनुपर्छ। तिनीहरू मध्ये एक मार्सलस मा लन्सहान पैलेस हो, जो अतिशैली बिना वास्तुकला को एक वास्तविक कृति हो। महल को निर्माण एक नदी को नहर को निर्माण को अन्त मा समाप्त भएको थियो, जो पानी को कमी संग नागरिकहरु को समस्या को हल।
वास्तुकलाको अर्को उत्कृष्ट टुक्रा "रेडन्त सिटी" हो। होइन, यो क्षेत्र वा ब्लक होइन। यो एक आवासीय उच्च वृद्धिको भवन हो, तर यो इमारत हेर्ने पछि, तपाईले यो बुझ्नुहुनेछ कि यो नाम वर्णन गरिएको छ।
र खेलकुद प्रेमीहरू मार्सिले मा उनीहरूको मनपर्ने एउटा ऐतिहासिक स्थल भेट्टाउँछन्। नाम "वेलोडर्रोम" को बावजूद, प्रसिद्ध मार्सिल्स स्टेडियम द्वारा पहनाएको छ, केवल फुटबल म्याच यहाँ आयोजित छ।
मर्सिलेस यति धेरै विविध र बहुमूल्य छन् कि तपाई यस शहरको साथ प्रेममा बिर्सन सक्दिन, जुन महानता संग भिजेको देखिन्छ, इतिहास र रहस्य को रहस्यमय पनी स्पाइडरवेबमा लिपि देखिन्छ। प्रत्येक भवन, प्रत्येक सडकले संसारमा नयाँ रूप बनाउँछ। यो बेकार मार्सिले मा एक मनपर्ने शहरहरु मध्ये एक हो जसले पनि एक पटक भेट्टायो।
स्की रिजर्ट म्यान्जेरोक
के मलाई भारतको भिसा चाहिन्छ?
मेडिरा - महिनाको मौसम
Adygea - पर्यटक आकर्षण
Gelendzhik को समुद्र तटहरु
तहको चक्र लामो
चिडियाघर सेन्ट पीटर्सबर्ग
Kronstadt मा के देख्नुहुन्छ?
ईजियन सागरमा टर्कीको रिसोर्ट्स
जाडोको लागि एप्पल मसाले आलु
पियर्समा पेइज, फ्राइङ प्यानमा फ्राइड गरियो
स्पिन को लागि कोर्सेट
रजोनिवृत्तिमा खतरनाक रक्तचाप
34 हप्ता इशारा - यो कति महिना छ?
डेस्कटप कार्यालय लम्बाइ
महिलाहरूको लागि सबैभन्दा महान् इत्र
ओरिएटल आहार मेनु
Pediculosis - इन्सुलेशन अवधि
ग्रीनहाउसहरूको लागि टमाटरको उच्च उपज किस्महरू
महिलाहरु को लागि अंगूर को लाभ